Doorashada Soomaaliya:- Shan Qaab Oo Loo Sugaayo Amniga Doorashada Soomaaliya | Gaaroodi News
Doorashada Soomaaliya:- Shan Qaab Oo Loo Sugaayo Amniga Doorashada Soomaaliya
July 29, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Maanta waxaa Soomaaliya si rasmi ah uga bilowday howlaha Doorashada. Magaalada Kismaayo ayey ka dhacday codeynta xubnaha Aqalka Sare ku metelaya maamulka Jubbaland.
Baarlamaanka Maamul Goboleedka ayaa u codeeyay qaar ka mid ah xubnahaas oo illaa siddeed musharrax ay ku tartameen.
Waxaa codeyntii maanta ku soo baxay Ilyaas Baddal Gabboose, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, Cabdirisaaq Maxamed Cusmaan, iyo Inkastoo weli aan lagu dhawaaqin natiijada, haddana loo tanaasulay Iftiin Xasan Iimaan Baasto.
Bishii June ee sannadkan, Xafiiska Ra’iisul Wasaare Rooble wuxuu soo saaray qaabka loo sugayo amniga howlaha doorashada. Midda sida adag loo ilaalin doono waa tan Golaha Shacabka oo ergooyiin ay u codeyn doonaan mudaneyaasha ku tartamaya.
Sida ay muujineysa shaxda, Ra’iisul Wasaaraha ayaa xuddun u ah howlaha Amniga, waxaana ku wehlinaya talisyada booliska ee Federaalka iyo Maamul Goboleedyada iyo AMISOM.
Qaabka Amniga Doorashada
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble wuxuu dhawaan soo magacaabay guddiga doorashooyinka iyo xallinta khilaafaadka heer federaal xilli uu dalka ku jira diyaargarowga qabashada doorasho dadban.
Waxaa Soomaaliya ka taagnaa khilaafka hareeyay hanaanka doorashada iyadoo Ra’iisul wasaaraha uu horkacayo dadaallada lagu xallinayo cabashada iyo in dalka uu galo doorasho xor ah iyo xalaal ah.
Haddaba qaabkee loo sugaya amniga doorashada.
Heshiiskii 27-dii May 2021
1. In la dhiso Guddi Amni oo ka kooban 9 xubnood, mas’uulna ka ah amniga doorashada, uuna hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, xubnaha ay ka mid yihiin Taliyayaasha Booliska Federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowlada Federaalka, iyo Taliyaha Booliska AMISOM;
2. In Guddiga Amnigu diyaariyo ciidamo u gaar ah illaalinta goobaha ay ka dhacayso doorashada, gaar ahaan goobaha lagu dooranayo kuraasta Somaliland, Guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya;
3. Golaha Wadatashiga Qaranku wuxuu farayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga labada heer in aysan ku milmin, faragelinna ku sameyn arrimaha siyaasadda iyo hirgelinta doorashada;
4. In Guddiga Amniga doorashadu ay warbixin joogta ah siiyaan Golaha Wadatashiga Qaranka si ay go’aan uga gaaraan hadba xaaladda taagan ee arrimaha amniga doorashada.
Qaab dhismeedka maamul ee amniga doorashada
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa hoggaamin doonaa sugidda amniga doorashada iyadoo uu kaashanayo guddiga qaran ee amniga doorashooyinka iyo guddiga xallinta khilaafaadka.
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Guddiga Amniga doorashada qaran.
Isu-duwid iyo isgaarsiinta xarumaha hawlgallada doorashada.
Doorka iyo Masuu’liyadda Ccidamada amniga.
Guddiga amniga doorashada qaran
Guddigan waxaa hogaaminayaa xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya , waxay ka kooban yihiin ilaa 7 qeybood oo isugu jirta booliska maamul goboleedyada, booliska federaalka iyo booliska Amisom.
Booliska Amisom waxay ka qeyb qaadan doonaan sugidda amniga magaalooyinka iyo goobaha ay ka dhacayaan doorashada.
Guddi qaabilsan amniga doorashada heer Dowlad Goboleed
Guddigan waxaa horkici doonaa taliyaha ciidanka booliska ee Maamul Goboleedyada si loo xaqiijiyo amniga doorashooyinka, waxay isugu jiraan Taliyeyaasha booliska, ciidamada sirddoonka, ciidamada daraawiishta, taliyaha ciidanka militeriga , booliska Amisom, ururada bulshada rayida iyo wasaaradda amniga.
Guddiga u qaabilsan amniga doorashada gobolka Banaadir
Sugidda amniga doorashada gobolka Banaadir waxaa horkacayaa taliyaha booliska gobolka Banaadir, waxaana guddigan kamid ah ururada bulshada rayidka, wasaaradda amniga, booliska Amisom, Taliyaha ciidamada militeriga iyo taliyaha nabadsugidda ee gobolka Banaadir.
Dhawaan madaxda Soomaalida waxay ku heshiiyeen in marka kale dalka ay ka dhacdo doorasho dadban taasoo ka dhigan in ergooyiin la soo xulay ay dooran doonaan xildhibaannada barlamaanka.
Halkii kursiba, musharrixiinta ku tartameysa waxaa u codeyn doona 101 qof, waxayna ka dhigan tahay in tirada guud ee codeynaysa ay gaareyso 27,775 Ergo.
Doorashadii dhacday sannadkii 2016, waxa kursigiiba u codeeyay 51 ergo, waxayna tirada guud gaareysay 14,025 oo qof.
Tobannaan ka mid ah ergooyinkii codeeyay doorashadaas ayaa lagu dilay magaalooyin kala duwan afartii sanno ee la soo dhaafay, kuwa badan oo ka mid ahna wadanka way ka carareen, halka boqollaal kale ay markii dambe cafis weydiisteen ururka Al-Shabaab si ay uga nabad galaan ugana badbaadaan dil
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Qaraxii ka dhacay Muqdisho
Wax ka Ogoow 10-ka diyaaradood Ee Ugu Waaweyn Dunida
Qiimaha Maceeshadda Quutal-daruuriga Ah Oo Ku Dhaw Inuu Laba-laabmo Iyo War La’aanta Xukuumadda Talada Haysa
” Xisbiga Cadaalada Iyo Daryeelka Aniga Oo kawakiila Gudoomiyahayga Faysal Cali Waraabena Kawakiila Maanta Halkan Hortiina Waxaanka Qaadanaynaa Anaguna Saddex Arday ” Xildh Mohamed Khadar Daahir + Muuqaal
Maareeyaha Haayada Duulista Iyo Iyo Madaarada Somaliland Md Sayid Cumar Cabdilaahi Aadan Ayaa Uhambalyeeyay Ardayda Kaqalinjabisay Dugsiyada Sare Iyo Dhexe Ee Degmada Balli-Mataan + Muuqaal